Yenza iimodeli ze-BIM zokufakelwa kwemibhobho Oko uza kufunda Sebenza ngokubambisana kwiiprojekthi ezininzi zoqeqesho ezibandakanya iiprojekthi zemibhobho.
Kule khosi siza kugxila ekusetyenzisweni kwezixhobo zeRevit ezisincedayo ekuqhubeni uhlalutyo lwezakhiwo. Siza kubona ukuba silufaka njani ulwazi lwamandla kwimodeli yethu kunye nendlela yokuthumela olu lwazi kunyango ngaphandle kweReit. Kwicandelo lokugqibela, siya kunika ingqalelo ekwenzeni iinkqubo ezinengqiqo ...
Siyakwamkela kwimeko ye-Naviworks, isixhobo sokusebenzisana sika-Autodesk, esenzelwe ulawulo lweeprojekthi zokwakha. Xa silawula iiprojekthi zokwakha nezokulima kufuneka sihlengahlengise kwaye siphonononge iintlobo ezininzi zeefayile, siqinisekise ukuba iinkalo ezahlukeneyo zisebenza kunye nokudibanisa idatha ukwenza intetho ...
Le khosi ye-AulaGEO ifundisa ukusetyenziswa kweRevit kwimodeli, uyilo kunye nokubala iinkqubo zombane. Uya kufunda ukusebenza ngokubambisana namanye amacandelo anxulumene noyilo nokwakhiwa kwezakhiwo. Ngexesha lokuphuhliswa kwekhosi siya kuthi siqwalasele ubumbeko oluyimfuneko ngaphakathi kwiprojekthi yokuHlaziywa ukuze sikwazi ukwenza ...
Kule khosi siza kugxila ekukhupheni ubuninzi ngokuthe ngqo kwiimodeli zethu ze-BIM. Siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo zokukhupha ubungakanani usebenzisa iRevit kunye neNavy. Ukukhutshwa kwezibalo zeetriki ngumsebenzi obalulekileyo oxutywe kwizigaba ezahlukeneyo zeprojekthi kwaye udlala indima ebalulekileyo kuyo yonke imilinganiselo ye-BIM. Ngexesha lale khosi uya kufunda ...
Iikhosi-Ukusebenza kweBIM Iikhosi zeNavisWorks Iikhosi zokuhlaziya
Funda uyilo lolwakhiwo usebenzisa isoftware ePhucukileyo yoyilo. Yila isiseko sokwakha esipheleleyo, imiqolo yolwakhiwo Imiqadi, iinkcukacha Izicwangciso zokulinganiswa kunye noyilo Umqeqeshi ucacisa imiba yokutolikwa kwemidwebo yolwakhiwo kunye nendlela enokwenziwa ngayo kwimodeli enamacala amathathu. Uyenza njani indlela yokuprinta eyicacisiweyo kwaye iyaqondwa kancinci kancinci ...
Isikhokelo sokuyila esisebenzayo ngeModeli yoLwazi lweZakhiwo ejolise kuyilo loyilo Zoba, uyilo kwaye uxwebhu lweeprojekthi zolwakhiwo nge-REVIT Ngenisa indawo yoyilo nge-BIM (Ukwakha uLwazi lweeModeli) I-Master yezixhobo ezinamandla zokuzoba Yenza ezakho itemplate Ukuthumela ngaphandle kwiinkqubo zokubala Yenza kunye neeplani ...
Funda ukusebenzisa i-REVIT MEP kuyilo loFakelo lweSanitary. Wamkelekile kule khosi kuFakelo lweSanite ngeRevit MEP. Izinto eziluncedoUya kulawula ukusuka kujongano ukuya ekudalweni kwezicwangciso. Uya kufunda kunye neyona ndawo ixhaphakileyo, iprojekthi yokwenyani yenqanaba loku-4. Ndiza kukukhokela inyathelo ngenyathelo, andizukucinga ukuba wazi nantoni na malunga neRevit okanye iSanitaria. ...
Uyilo lweComputer ye-BIM Le khosi sisikhokelo esinobuhlobo kunye nesingeniso kwihlabathi loyilo lwekhompyuter usebenzisa iDynamo, iqonga lokuvula inkqubo yomthombo ovulekileyo wabayili. Ukuqhubela phambili kuphuhliswa ngeeprojekthi apho iikhonsepthi ezisisiseko zenkqubo ebonakalayo ziya kufundwa. Phakathi kwezihloko esiza kujongana nomsebenzi weejiyometri ...
Iikhosi-Ukusebenza kweBIM Iikhosi zeNkqubo Iikhosi zokuhlaziya
Zoba, uyile kwaye uxwebhu lweeprojekthi zenkqubo yakho ngeRevit MEP. Ngena kwicandelo loyilo nge-BIM (Ukwakhiwa kweModeli yoLwakhiwo) Izixhobo ezinamandla zokuzoba Qwalasela imibhobho yakho Ngokuzenzekelayo ukubala iidayimitha Uyilo lweenkqubo zokumisa umoya, Yenza kwaye ubhale iinethiwekhi zakho zombane. Yenza ...
Iikhosi-3D Modeling Iikhosi-Ukusebenza kweBIM Iikhosi zokuhlaziya
Isikhokelo esipheleleyo sokusetyenziswa kohlalutyo lobume beRobot kwimodeli, ukubalwa kunye noyilo lwekhonkrithi kunye nolwakhiwo lwentsimbi. Le khosi iya kugubungela ukusetyenziswa kwenkqubo yoHlahlelo loLwakhiwo lweerobhothi kwimodeli, ukubala kunye noyilo lwezixhobo kulwakhiwo lwekhonkrithi oluqinisiweyo kunye nezakhiwo zeshishini ngentsimbi. Kwikhosi ejolise ...
Funda ukusebenzisa iRevit, uhlalutyo lolwakhiwo lweerobhothi, kunye ne-Advance Steel yoyilo lolwakhiwo lwezakhiwo. Zoba, uyile kwaye uxwebhu lweeprojekthi zolwakhiwo nge-REVIT Ngenisa icandelo loyilo nge-BIM (Ukwakha uLwazi lweModeli) I-Master yezixhobo ezinamandla zokuzoba Yenza ezakho itemplate Ukuthumela ngaphandle kwiinkqubo zokubala Yenza ...